Naadiga Barcelona oo xiddig aan Paul Pogba aheyn Manchester United ka dooneysa? | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Naadiga Barcelona oo xiddig aan Paul Pogba aheyn Manchester United ka dooneysa?
Naadiga Barcelona oo xiddig aan Paul Pogba aheyn Manchester United ka dooneysa?
Posted by: Ahmed Haaddi September 22, 2018
Muqdisho – Barcelona ayaa weli weerar ku ah kooxda Manchester United, kaddib markii ay dalab kale oo ah adeega Ander Herrera ay u soo bandhigtay kooxdaan reer Ingiriis.
“The Sun” oo ah wargeys ka soo baxa England ayaa sheegaya in Barcelona ay isku dayi doonto inay lasoo saxiixato 29 jirka khadka dhexe uga cayaara kooxda Manchester United ee Ander Herrera.
Heshiiska laacibka reer Spain ee Ander Herrera ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana suuragal ah in kooxda reer Spain ay isku daydo saxiixiisa bisha January ee soo aadan, iyadoo ku raja weyn in ay beeca xurta ah kula wareegto.
Ander Herrera ayaa qudhiisa doonaya inuu sii joogo Manchester United, lakiin waxa uu ka careysan yahay dhaqdhaqaaq la’aanta maamulka Red Devils si ay kaga saxiixdaan heshiis cusub oo uu kusii joogayo Old Trafford.
Dhanka kale Barcelona ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo ay ku dooneyso iney ku dawadaan xiddiga Manchester United ee Paul Pogba kulan walba inta ka harsan kal cayaareedkan.
Pogba ayaa si weyn usoo jiitay kooxda horyaalka La Liga inta lagu guda jiray daaqadda kala iibsiga cayaartooyda xagaagan markii uu xariir niyad jaba soo kala dhexgal isaga iyo maamulaha United Jose Mourinho.
Maamulaha guud ee Barcelona Pep Segura iyo agaasimayaasha farsamada Eric Abidal iyo Ramon Planes, ayaa si dhaw kula socda xaalada Pogba iyagoo doonaya inay kusoo qataan xiddigaan £100 milyan oo gini.
Previous: Francesco Totti oo dhawr jeer isku dayay in xidigaha Ronaldo iyo Ibrahimovic uu keeno Roma
Next: Taabuu: Tubaako casriyaysan